Global Transmission Report : Zimbabwe to soon begin works on MoZiSa interconnection
Zimbabwe to soon begin works on MoZiSa interconnection [free access]
State-owned Zimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company (ZETDC) is all set to begin construction works for the 250-km-long 400 kV power transmission line from Triangle substation to Beitbridge, which forms part of the Triangle (Zimbabwe)–Nzhelele (South Africa) cross-border link.
Currently, environmental and social impact assessment (ESIA) for the project is underway in Zimbabwe.
The Zimbabwe–South Africa link is a part of the Mozambique, Zimbabwe and South Africa (MoZiSa) Interconnection Project and is expected to enhance connectivity among the three countries by improving the overall trade of electricity in Southern African Power Pool (SAPP).
The interconnection project includes a 400/330 kV substation at Triangle and a 400/330 kV substation at Orange Grove in Zimbabwe; the 275-km, 400 kV Triangle (Zimbabwe)–Nzhelele (South Africa) interconnector line and a 400 kV line bay at the Nzhelele substation in South Africa; the 185-km, 400 kV Orange Grove (Zimbabwe)–Inchope (Mozambique) interconnector line; and a new 400/220 kV Inchope substation, the 360-km, 400 kV Inchope–Matambo line and the 115-km, 400 kV Matambo–Songo line in Mozambique.